Izizathu Eziyishumi Ezivame kakhulu Zokwehluka Kwamagazi eGlucose Level-Diabetes Talks-Sinocare
Izizathu Eziyishumi Ezivamile Zokushintshashintsha Kweveli Yegazi Glucose
Isikhathi: 2020-02-19 Hits: 224
Ezinye iziguli ezinesifo sikashukela zikhathazekile kakhulu ukuthi, yize ngokungangabazeki zenza imizamo emikhulu yokulawula ngokuqinile ukudla, ukuthatha izidakamizwa ezifanele ngesikhathi / umthamo odingekayo futhi zivivinya njalo ukuzivocavoca, izinga leglucose legazi lisashintshashintsha nje ngesimo sezulu entwasahlobo. Ngempela, ukuguquguquka kwamazinga kashukela egazini kuthonywa yizici eziningi. Kodwa-ke, kunzima ngokwengeziwe kwiziguli ezinesifo sikashukela ukufuna ngokwazo. Namuhla, ezinye izinto ezithambekele kunganakwa zifingwe kanjena ngokulandelayo.
Ngaphambi kokuba ukhathazeke kakhulu, ungaqala ubheke lezi zinto ukuthola izizathu zokushintshashintsha kwamazinga kashukela egazini bese unikeza ukwelashwa okubonakalayo!
Lapho kuthathwa ukudla okuningi noma ukudla okukodwa kakhulu, izinga likashukela wegazi lizoshintsha.
Okwakuqondakalayo kuyaqondakala kakhulu. Lapho kuthathwa ukudla okuningi, izinto eziningi ziguqulwa ngokwemvelo zibe ushukela, bese ngenxa yalokho glucose omkhulu we-postprandial glucose uyenzeka.
Lesi sakamuva asikhathazwa abantu abaningi. Isibonelo, uma kuthathwa kuphela irayisi, ushukela wegazi we-postprandial uzoba mkhulu kakhulu, futhi i-hypoglycemia nayo yenzeka ngaphambi kokuqedwa kokudla. Uma ukwakheka kokudla kulungiswa ngokwezinga elithile (njengokufakwa okufanelekile kokudla okungenamafutha, ukukhuphuka kwemifino eluhlaza nokufakelwa ubhontshisi kulayisi), ushukela wegazi we-postprandial uzolawulwa kahle.
Ngakho-ke, ushukela we-postprandial glucose ungakhuphuka ngemuva kokudla okuningi kakhulu noma ukudla okukodwa kakhulu.
Lapho uketshezi lomzimba lushoda, ushukela wegazi uzokhuphuka, ngoba ukugcwala kwe-glucose ekuhambeni kwegazi kuyenyuka. Njengendlela evamile, ukuphuza izingilazi ezi-8 zamanzi ngosuku kufanelekile kwiziguli eziningi zikashukela, kepha kusadingeka amanzi amaningi lapho iziguli zesifo sikashukela zinesimo somzimba esikhudlwana noma umthamo omkhulu wokuzivocavoca.
Iglucose yegazi ingaphazanyiswa ezinye izidakamizwa. Isibonelo, ukukhuphuka kwamazinga kashukela egazini kubangelwa yimithi efana nama-hormone, inzalo, amanye ama-anti-depressants, izidakamizwa ezilwa ne-psychotic kanye nama-diuretics athile.
Ngakho-ke, ngaphambi kokuphathwa kwanoma yisiphi isidakamizwa esisha, kufanele kutshelwe izimo zikashukela wegazi, futhi kuboniswane nodokotela noma osokhemisi.
4. Isikhathi Sesikhathi
I-Hyperglycemia ngemuva kokuvuka ekuseni kungenzeka ibe yinto yesifo sikashukela mellitus. Ngo-3: 00 ~ 4: 00 ekuseni, kudedelwa ama-hormone okukhula namanye ama-hormone ukuvusa umzimba womuntu; ukuzwela komuntu kwe-insulin kufakwa yilawa ma-hormone ukudala i-hyperglycemia lapho kusa.
Kodwa-ke, uma i-insulin ngokweqile noma izidakamizwa zokulawula ushukela wegazi zithathwa ebusuku bangaphambili noma uma ukudla okunganele kuthathwa ngobusuku obudlule, i-hypoglycemia ingahle ibe khona ngakusasa ekuseni.
5. Umjikelezo wokuya esikhathini
I-glucose yegazi kwabesifazane ingahle iguquke ngenxa yokushintshwa kwama-hormone esikhathini sokuzala. Ngakho-ke, uma izinga likashukela wegazi weziguli zikashukela besifazane likhuphuka njalo kungapheli isonto elilodwa ngaphambi kokuya esikhathini, inani lokudla lama-carbohydrate kufanele lincishiswe, noma ukuvivinya umzimba okuningi kufanele kuthathwe.
6. Ukulala okunganele
Ukulala okunganele akulimazi kuphela imizwa, kodwa futhi kuyinkinga ne-glucose yegazi. Ocwaningweni lwaseDashi, uma kuqhathaniswa nolokulala okwenele, ukuzwela kwe-insulin kwehle ngo-20% lapho kuvunyelwe amahora okulala amane kuphela ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo loku-4.
I-7. Isimo sezulu
Isimo sezulu esibi ngokwedlulele (kungaba ngesimo sezulu esishisayo noma sezulu esishisa kakhulu), ukulawulwa kweglucose yegazi kuzothonywa.
Ehlobo elishisayo, izinga likashukela wegazi lizokhuphuka kwezinye iziguli ezinesifo sikashukela, kodwa lingancipha kwezinye iziguli ezinoshukela (ikakhulukazi labo abasebenzisa i-insulin). Ngakho-ke, esimweni sezulu esishisayo, iziguli zesifo sikashukela akufanele ziphume, futhi ukuguqulwa kwamazinga kashukela egazini kufanele kubhekwe kakhulu.
Ngesikhathi sokuhamba, abantu bangathatha ngokunganaki ukudla, iziphuzo futhi benze eminye imisebenzi. Izinga kashukela egazini lithonywa yilezi zinto.
Ngaphezu kwalokho, ukushintshwa komsebenzi nokuphumula kuzokwehlisa uhlelo lokuphatha, kuphazamise umkhuba wokudla / wokulala, futhi kube nomthelela ekulawuleni ushukela wegazi. Ngakho-ke, ngesikhathi sokuhamba, ukuguqulwa kwezinga le-glucose egazini kufanele kugadwe njalo yiziguli ezinesifo sikashukela.
I-caffeine esiphuzweni izonyusa ukuphendula kwabantu kuma-carbohydrate futhi ngaleyo ndlela ibangele ukukhuphuka kweglue glucose ye-postprandial. Njengoba kuboniswe ezifundweni zase-American Duke University, ngemuva kokudla i-caffeine eyi-500 mg (okulingana no-3 ~ 5 izinkomishi zekhofi), izinga likashukela egazini likhuphuke ngo-7.5% ngosuku ngokwesilinganiso ezigulini ezinohlobo lwe-2 mellitus yesifo sikashukela.
10. Imininingwane yokulinganisa ushukela wegazi
Ngaphambi kokulinganiswa kwe-glucose yegazi, izandla kufanele zigezwe (ikakhulukazi ngemuva kokuba ukudla kuthintiwe), ngaphandle kwalokho kungaphakanyiswa i-alamu yamanga, ngoba imitha yeglucose yamanje iyazwela kakhulu futhi ushukela ogcotshwe esikhunjeni uzongcolisa isampula yegazi. Njengoba kuboniswe ngocwaningo oluthile, inani elilinganisiwe le-glucose yegazi laliphakeme okungenani nge-10% kuma-88% ababambiqhaza abakhumula ikhasi likabhanana noma lisikiwe i-apula kunaleyo yokugeza izandla. Ukulinganiswa okungafanele kwe-glucose yegazi kubangelwa ngisho ne-lotion no-ayisikhilimu.
Ikhasi Langaphambili: Izeluleko Eziphezulu Eziyisikhombisa Okufanele Zenziwe Ngemuva Kokuhlushwa Isifo Sikashukela
Ikhasi elilandelayo: Yini okufanele siyinake kwezemidlalo?